Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Matshi 2020	• 15 Comments
30 Matshi 2020 kwi-00: 07
Iimpendulo ze-Zero kunye + /-- ababukeli abayi-17.000, kunokwenzeka njani kwi-YT
kwaye kufuneka utsho inani elihle lemizuzu ye-6, okanye u-3
enkosi uJanet, ibrashi yegrisi kaJanet.
Ngokwenene emzuzwini 4; 23 uthi, Ndoyikisiwe ngokufa unyaka wonke ngenxa yesangqa sesityalo, uJanet Ossebaard umlinganiso we-creepy, inene hey nguJanet, biza uMartin ngoku
31 Matshi 2020 kwi-08: 35
Hahaha ... ooh ooh ooh ... yindoda yendoda ... ukuba iphakamile kangakanani i-IQ ukuthatha olu hlobo lwamanani ngokunzulu.
"Ingelosi yakho esemhlabeni" nayo iyatsho ngesiqu sayo ..
Kuya kufuneka bafundise abadlali abasebenza ngokungxolayo kungcono ukuphepha ukubhala amanqaku. Ukuwa kwe-kabal ..
Uba lilungu le-IMB njani? Ukutshintsha kwesivakalisi esinciphile? Ngaba sele zikwinkqubo entsha yebhanki yemali eza kuthi ithathe indawo endala? I-Inoffizieller Mitarbeiters (i-IMB'ers): bazenza ngathi bayayikhupha ngenxa yabantu, kodwa eneneni ngabona babekrelekrele kakhulu; amalungu e-NSB namhlanje? Unayo i-IMBers ekuxelela ukuba uhlale ngaphakathi kwaye ugadle imithombo yeendaba yendaba yeendaba yaseburhulumenteni kwaye une-IMBers ekuxelela ukuba u-Q Anon kunye noTrump bacoca i-cabal.
31 Matshi 2020 kwi-08: 36
Ewe ewe kunye neLange IMB'er Frans iyakwazi ukudlala umdlalo
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.304.972
Abderrazak Samir op Ingxaki yeCorona: iphelile nini le nto kwaye kufuneka senze ntoni ngoku?
tedsdam op Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
UMartin Vrijland op Ingxaki yeCorona: iphelile nini le nto kwaye kufuneka senze ntoni ngoku?